pakupedzisira! apple pakupedzisira inowana masikati machena ekuchengetedza nguva chaiko
Kuru Nhau & Ongororo Pakupedzisira! Apple pakupedzisira inowana Masikati Ekuchengetedza Nguva zvakanaka
Pakupedzisira! Apple pakupedzisira inowana Masikati Ekuchengetedza Nguva zvakanaka
Kana iwe & apos; uchinetseka kuti sei uchiramba uchiratidza kunonoka nhasi, kana kuti nei iwe & apos; uchingomuka na1 pm, pane tsananguro yakapusa. Uye haina chekuita nezvese doro iro rawakadya nezuro husiku. Na1: 59 am Svondo mangwanani muU.S., Daylight Saving Time yakadzoka uye maAmerican munzvimbo zhinji (Arizona neHawaii vakasiyiwa) vakafambisa wachi yavo kumberi awa rimwe.
Chokwadi, unogona kunzwa kubiridzirwa nekuti nekusvetuka maminetsi makumi mashanu nepfumbamwe pakati pa2 am na2: 59 am, hauna kukwanisa kutarisa awa rimwe chetePiro Yanguinfomercial iwe wanga uchitarisira kuona. Asi kubva zvino kusvika muna Mbudzi 1, avo vari kuUS nedzimwe nyika vanotsigira DST vachange vachidzoka kumba kubva kubasa masikati uye vachine imwe nguva yekuzorora husiku husati hwapinda. Uye chinofadza ndechekuti haioneke kuti paive nekukanganisa kubva kuIOS kana Android makambi. Pachivanhu, kutanga kana kupera kweZuva Kuchengetedza Nguva kwave kuri njodzi kune vashandisi ve iPhone. Zvichida zvinonyadzisa zvikuru zvakaitika muna 2012 apo iOS yakadzosera maawa kumashure kweawa pachinzvimbo chemberi kweawa . Oops.
Takaita bvunzo yekukurumidza uye yakasviba uye tikazoona kuti kana ukaisa alarm pa iPhone yako kwenguva pakati pa2 am na2: 59 am Svondo mangwanani (iyo maminetsi makumi mashanu nemapfumbamwe anonyangarika kana Zuva reKuchengetedza Nguva ratanga kushanda), iOS yakangoerekana yawedzera awa kumamiriro. Semuenzaniso, takaisa alarm ye2: 45 am uye yakaratidza sa3: 45am pafoni yedu. Kune rimwe divi, alarm yakamisirwa 2:45 am pafoni yeApple yakangotadza kudzima sezvo pakanga pasina 2:45 am Svondo mangwanani munzvimbo zhinji. Zvichida Google, inozivikanwa nekuyedza kubvisa marwadzo evashandisi veApple, inogona kugadzirisa izvi pane Android 11
Parizvino, vese vashandisi veApple neIOS vari mune yakajeka kusvika munaNovember. Ndipo panodzoserwa nguva yekurara yavakabirwa mangwanani ano.
iyo pixel yakakosha
chii chakaitika kune htc mafoni
Ini ndinogona kutevedzera iyo iPhone 7 Plus 'Portrait modhi neapp? Let & apos; s zviongorore: iPhone 7 Plus vs FabFocus
Yakanakisa tsika Android ROMs yeiyo HTC Imwe (M8)
Kutanga 5G kufona kunoitwa pamusoro peAT & T & apos; s C-bhendi spectrum
Best Metro neT-Nhare mbozhanhare kutenga muna 2021
Pano & nei apera kamera & apos; s megapixel kuverenga isingakoshe kupfuura iwe zvaunofunga
Maitiro ekuziva kuti yakareba sei yako Android smartphone inogara